iPhone 3GS Modem Firmware 06.15.00 အတွက် Custom Firmware လုပ်ခြင်း...
iPhone 3GS Modem Firmware 06.15.00 တွေက Apple က ထုတ်တဲ့ Stock Firmware ကို တိုက်ရိုက် update လုပ်လို့မရပါဘူး... အဲဒီတော့ custom firmware အရင်လုပ်ပြီးမှ version upgrade လုပ်ရပါတယ်... ကျတော်အတွက် အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်တဲ့ Sn0wBreeze နဲ့ custom firmware လုပ်နည်းကို ပြောပါ့မယ်... iOS 4.3.3, 5.0, 5.0.1 သုံးမျိုးစလုံး လုပ်ခဲ့ဖူးတာ လုပ်တဲ့ အဆင့်တွေ မကွာပါဘူး...
ပထမဆုံး သက်ဆိုင်ရာ iOS firmware နဲ့ http://ih8sn0w.com/ က Sn0wBreeze ကို download လုပ်ထားပါ...
Sn0wBreezexxx.exe ကို double click နှိပ်ပြီး run ပါ...
ဒီ software က ငွေကြေးနဲ့ ရောင်းစားဖို့ ထုတ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး... အကယ်၍ မင်း အခကြေးငွေနဲ့ ဝယ်ယူခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ငွေပြန်တောင်းပါ... ဒီဟာက ရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး... ဒီsoftware ကြောင့် မင်းရဲ့ ဖုန်းပျက်စီးသွားရင်တော့ ငါတာဝန်မယူနိုင်ပါဘူး... ဆိုပြီး သတိပေးတဲ့စာသားပါတဲ့ windows စတင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်... ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပေါ့ဗျာ... ပျက်မှာ စိုးရိမ်လို့ ဆက်မလုပ်တော့ဘူး ဆိုရင်တော့ close ကို နှိပ်ပေါ့...
OK နှိပ်ရင်တော့ အောက်ကပုံ အတိုင်း တက်လာပါလိမ့်မယ်...
ကျတော် သုံးထားတဲ့ Sn0wbreeze က version 2.9.1 ပါ... custom firmware လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ iOS version တွေကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်... windows ရဲ့ ညာဘက် အောက်ထောင့်က အပြာရောင် နောက်ခံနဲ့ မြှားကို click လုပ်ပါ...
ဒီအဆင့်က ကျတော်တို့ download လုပ်ထားတဲ့ iOS firmware ဖိုင်ရှိတဲ့ နေရာကို Browse ကိုနှိပ်ပြီး ညွှန်ပြပေးရမှာပါ......
firmware တွေ့ပြီဆိုရင် iPhone 3GS old-bootrom လား new-bootroom လားဆိုတာ ရွေးပေးရပါမယ်... Old လား News လား မသိရင်တော့ Detect it for me. ကို နှိပ်ပြီး သူပြော တဲ့ အဆင့်တွေ အတိုင်း လိုက်လုပ်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်... ကျတော့်ဖုန်းက old bootrom မို့ Old-Bootrom ကိုနှိပ်ပါတယ်...
အပေါ်က ပုံအတိုင်း ပေါ်လာရင် အပြာရောင် နောက်ခံနဲ့ မြှားကို click လုပ်ပါ...
Expert Mode နဲ့ လုပ်နေကြမို့ ကျတော်တော့ Expert Mode ကို click လုပ်ပါတယ်...
General ကို click လုပ်ပြီး အပြာရောင် နောက်ခံနဲ့ မြှားကို click လုပ်ပါ...
ကိုယ့်ဖုန်းက Locked ဖုန်းဆိုရင်တော့ ဒီအဆင့်မှာ Install 06.15.00 iPad baseband ကို အမှန်ခြစ်စရာ လိုပါတယ်... 06.15.00 ပြောင်းထားရင်တော့ ထပ်လုပ် စရာ မလိုပါဘူး...အပြာရောင် နောက်ခံနဲ့ မြှားကို click လုပ်ပါ...
Baseband ဆိုတာကို iPhone ထဲမှာ Modem Firmware လို့ ခေါ်ပါတယ်... iPhone ရဲ့ Setting > General > About ထဲမှာ Modem Firmware ကို ရှာနိုင်ပါတယ်... အခု custom firmware လုပ်နည်းက Modem firmware 06.15.00 ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေ အတွက်ပါ... Modem firmware 06.15.00 (06.15.00 iPad Baseband) ပြောင်းထားရင် GPS သုံးလို့ မရပါဘူး... နောက်တစ်ခုက အခုအချိန်အထိ Apple က ထုတ်ပေးတဲ့ firmware ကို မပြုမပြင်ဘဲ orginal အတိုင်း တင်လို့ မရတော့ပါဘူး... အဲဒါကြောင့် ကျတော်တို့ custom firmware ရေးရတာပါ...
ဒီအဆင့်မှာ မိမိကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက် boot logo လုပ်ပြီး ထည့်လို့ရပါတယ်... Apple logo ပဲ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Use Custom Boot Logo လေးထောင့် အကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ အမှတ်ခြစ်များကို ဖြုတ်ပါ... ပြီးရင်တော့ အပြာရောင် နောက်ခံနဲ့ မြှားကို click လုပ်ပါ...
ကျတော်ကတော့ ဘာမှ ထပ်မဖြည့်ချင်တဲ့ အတွက် အပြာရောင် နောက်ခံနဲ့ မြှားကိုပဲ click လုပ်ပါတယ်...
ဒီအဆင့်မှာတော့ Activate The iPhone [Hacktivate] နဲ့ Install SSH ရှေ့မှာ အမှန်ခြစ်ပြီး အပြာရောင် နောက်ခံနဲ့ မြှားကို click လုပ်ပါ ... Modem firmware 06.15.00 ဖြစ်နေရင် Activate The iPhone [Hacktivate] ကို အမှန်ခြစ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့...
အပေါ်က ပုံအတိုင်း မြင်ရရင်တော့ Build IPSW ကို နှိပ်ပါ... Sn0wbreeze က ကျတော်တို့ အတွက် custom firmware တည်ဆောက် ပေးနေပါပြီ...
ပြီးသွားရင်တော့ အပေါ်က ပုံအတိုင်း ပြပါလိမ့်မယ်... Sn0wbreeze က လုပ်ပေးတဲ့ custom firmware အဆင်သင့် ပြီးပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် OK နှိပ်ပြီး Sn0wbreeze က လုပ်ခိုင်းတဲ့ အဆင့်တွေ အတိုင်း ဆက်လုပ်ပြီး firmware update လုပ်လို့ရပါပြီ...
ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းသည် iPhone 3GS Modem Firmware 06.15.00 အတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်... အခြား iPhone မော်ဒယ် (သို့) အခြား modem firmware များတွင် လုပ်ဆောင်မိပြီး iPhone အဖြစ်မှ ဖုန်းပြောလို့ မရတော့တဲ့ iPod Touch အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် အတွက် ဂရုစိုက် လုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်...
My Labels: Apple, Jailbreak, iPhone 3GS, iOS